Ratsiraka, Ravalomanana ary Rajoelina:OLONA HIFAMALY FATY FOTSINY ! -
AccueilRaharaham-pirenenaRatsiraka, Ravalomanana ary Rajoelina:OLONA HIFAMALY FATY FOTSINY !
15/12/2016 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Ny tantara dia ampy andraisana fanapahan-kevitra ny amin’ny tsy tokony hiverenan’izany Andry Rajoelina, Marc Ravalomanana ary Didier Ratsiraka izany eo amin’ny fitondrana intsony. Niaina ary botrabotra ny zanaka malagasy nandritra ny fitondran’ny filoha Philibert Tsiranana. Notsindronin’ny amiraly Didier Ratsiraka tamin’ny revolisiona sosialista teo amin’ny fony mihitsy anefa ny firenena ka very rà nandritra ny 16 taona. Raha mba iny nefa netinety iny indray ny fari-piainan’ny Malagasy nandritra ny governemanta Tantely Andrianarivo, indro indray koa fa notsindronin’i Marc Ravalomanana tamin’ny antsy fanindroany ka dia niverina nijininika ny rà. Vao nanomboka nanakom-pery ny ratra dia notsindronin-dRajoelina tamin’ny antsy ka dia niboiboika indray ny rà. Vokany, lany rà tanteraka vokatr’izany tsindron’antsy nanjo azy izany ny firenena. Tsy nitsahatra nitontongana ny fari-piainan’ny Malagasy nanomboka tamin’ny taona 1972, vao mitady hiarina dia indro fa misy tsindron’antsy vaovao indray. Firenena miady amin’ny fahafatesana no novantanin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny taona 2014 noho ny herisetra nahazo azy nandritra ny 44 taona .
Miteraka adihevitra ilay lalàna vao avy nolanian’ny solombavambahoaka farany teo izay voalaza fa misakana ny fahafahan’ny amiraly Didier Ratsiraka, Marc Ravalomanana ary Andry Rajoelina milatsaka ho fidiana filoham-pirenena amin’ny taona 2018. Izao no marina, tsy nilàna io lalàna io akory. Efa tahaka izao ve sisa ilay Madagasikara sy ny vahoaka ao aminy vokatry ny nataon’ireo mpitondra teo aloha ireo dia mbola mendrika ny hiverina eo amin’ny fitantanana ity Tanindrazana ity izy ireo? Firenena efa miady amin’ny fahafatesana, lany rà vokatry ny fandatsahan-drà tsy nisy fitsaharana teto, dia mbola mendrika ny hiverina indray?
Firenena efa teo am-bavahaonan’ny fahafatesana no noraisin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina an-tanana: sazy iraisam-pirenena, fahantrana, fahalovana, sns. Tao anatin’ny roa taona monja no namerenana ny fitokisan’ny fianakaviambe iraisam-pirenena (COMESA, Frankofonia) sy ny mpamatsy vola iraisam-pirenena (10 miliara dolara farany teo tany Frantsa). Tsy azo lavina fa mbola maro ny zavatra tsy vita saingy efa manangasanga kosa ny lalan-kizorana amin’izany taorian’iny dinika niarahana tamin’ireo mpamatsy vola tany Frantsa farany teo iny. Dia ho sanatria ve hotsindronina amin’ny antsy ho faty tanteraka mihitsy ity firenena ity, ho fanomezana fahafaham-po ny amiraly Didier Ratsiraka, Marc Ravalomanana ary Andry Rajoelina?
Etsy an-danin’izany, tsy hisy fitoniana mihitsy eto amin’ny firenena raha ny iray amin’ireo mpitondra teo aloha ireo no tafaverina eo amin’ny fitondrana. Hifamaly faty fotsiny eo izany Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana ary Didier Ratsiraka izany. Ny hamotika tanteraka an’i Marc Ravalomanana Marc no mibaiko an-dRajoelina, ny hamaly ny fahoriana nahazo azy tamin’ny 2009 no manosika an-dRavalomanana, ny hamaly ny nataon-dRajoelina sy Ravalomanana taminy no manosika ny amiraly Didier Ratsiraka. Fehiny, olona tsy hanao afa-tsy ny hifamono ve no ndeha ho averina eo amin’ny fitondrana, dia mba ho aiza no hiafaran’ity firenena ity?
Tsy afa-bela amin’ireo loza voajanahary isika, ary ao anatin’izany ny rivodoza. Taorian’ny fandalovan’ny rivodoza AVA dia nitondra ny teny fampiononana sy ny fakaherezana ny Malagasy ny filoha Hery Rajaonarimampianina amin’ny maha ray aman-drenin’ny malagasy rehetra ...Tohiny